बिचरा ! १९ बर्षिय छोरालाइ सुतेकै ठाउमा ह’,’त्या गर्दिए , आमाले डाको छोडेर रुँ,दै गरिन ह”, त्याराको पर्दाफास (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
बिचरा ! १९ बर्षिय छोरालाइ सुतेकै ठाउमा ह’,’त्या गर्दिए , आमाले डाको छोडेर रुँ,दै गरिन ह”, त्याराको पर्दाफास (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki January 6, 2021
झापा । मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० का १८ बर्षीय सन्दिप भण्डारीको रहस्यमय मृ”त्यु भएको भन्दै पीडित परिवारले नेकपा (ओली समूह) का केन्द्रीय सदस्य युवराज वास्कोटालाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरेका छन् । सोमबार कुराकानी गर्दै सन्दिपका बुवा गोपाल भण्डारीले नेता बास्कोटाको घरमा छोराको रहस्यमय मृ”त्यु भएकाले उनीमाथी छानविन गर्न माग गरेका हुन् । नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएकै कारण प्रहरीले बास्कोटालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान नगरेको उनले आरोप लगाए । उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पनि बास्कोटालाई पक्राउ गर्नु पर्ने बताए ।
केही समयदेखि छोरालाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी नेता बास्कोटाले प्रयोग गर्दै आएको र उनकै घरमा मृ”त अवस्थामा फेला पर्नुले पनि घटना नियोजित देखिएको भण्डारीको भनाई छ । बास्कोटाको योजनामा छोरालाई अन्य स्थानमा ह”त्या गरी कोठामा सुताएको र आफुहरु पुग्नुअघि नै मुचुल्का तयार पार्नुले पनि घटना षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आशंका गरेको उनले बताए । घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन भन्दा पनि प्रहरीले बास्कोटाको बचाउ गरी पीडित परिवारलाई न्यायको साटो थप पीडा दिएको उनले बताए । मृत”ककि आमाले रुदै यो घटनाको बारेमा आफ्नो कुरा राखेकी छिन , तल भिडियोमा हेन्रुहोला ।